Angela Merkel “Turkiga Meelna ugama banaana Midowga Yurub” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Angela Merkel “Turkiga Meelna ugama banaana Midowga Yurub”
Angela Merkel “Turkiga Meelna ugama banaana Midowga Yurub”
Ra’iisalwasaaraha Jarmalka Angela Merkel oo ka qaybgashay dood Telifishinka oo dhex martay iyada iyo ninka loollanka adag kala dhexeeyo doorashooyinka soo socda ee xisbiga Hantiwadaagga, Martin Schulz ayaa ballan qaaday inay joojin doonto sii socoshada wadahadalada Turkiga iyo Midowga Yurub.
Merkel waxay ku adkaysatay in haddii ay doorashada soo socota ku guulaysato ay ku shaqayn doonto waajibnimada in aan turkiga waligii xubin ka noqon midowga Yurub, arinkaasna kala hadli doonto saaxiibadeeda midowga yurub si mowqif midaysan looga qaato, loona xadido mudada kama danbaysta ah ee wadahadalada Turkiga iyo Midowga Yurub.
Illaa haddaMa jirto wax jawaab ah ee dhinaca Turkiga oo ku saabsan Mowqifka Cusub ee Angela Merkel oo u muuqda hanjabaad sii kala fogayn karta Berliin iyo Ankara.
Xiriirka labadan dal ka dhexeeya ayaa mugdi sii galayay, waxayna muddooyinkaan danbe is dhaafsanayeen hadallo qallafsan oo dhinacba dhinaca kale ku eedaynayay.
Madaxwaynaha dalka Turkiga Rajab dayib Ordogan ayaa bishii tagtay ku timaamay madaxda Xisbiga xukuma jarmalka ee CDU inay yihiin Cadowga Turkiga, isagoo ugu baaqay codbixiyayaasha Jarmalka ee asalkoodu turkiga yahay in aysan u codayn Xisbiga Angela Merkel.
Doorashadaan ka dhici doonta dalka Jarmalka ayaa dadka codaynta xaqa u leh waxaa ka mid ah afar Milyan oo qof oo asalkoodu Turki yahay, kuwaasi oo natiijada doorashada saamayn ku yeelan kara.
Previous articleXeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Soomaaliyeed oo Kulan la qaatay Jaaliyadda Minneapolis
Next articleKa farxin carruur mise fikrad qaldan ku ababin ?